စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် တရုတ်အိမ်သုံး Wifi ဒစ်ဂျစ်တယ်လော့ခ်ထုတ်လုပ်သူ - Zhechi Electric
Home Wifi ဒစ်ဂျစ်တယ်လော့ခ်သည် AC 50/60Hz၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား 230V/400V၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ 125A လိုင်းမှ ဝန်ပိုခြင်း၊ ဆားကစ်ပြတ်ခြင်းနှင့် အထီးကျန်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။ smart reclosing breaker တစ်ခုအနေဖြင့်လည်း၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း၏ အဝေးထိန်းခလုတ် အဖွင့်/အပိတ် ဆားကစ်၊ Timing on/off circuit၊ delay on/off circuit၊ cycle on/off circuit တို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်လည်း ပါရှိသည်။
2 နှစ် အာမခံဖြင့် Home Wifi Digital Lock In Stock ရှိပါသည်။
Home Wifi ဒစ်ဂျစ်တယ်လော့ခ်အတွက် အခြေခံအချက်အလက်-
1. မော်ဒယ်- M5F
3. အရောင်အမျိုးမျိုးရှိသော စမတ်အသက်ရှူမီးအိမ်
4. Semi-conductor လက်ဗွေကို လက်ကိုင်တွင် ဝှက်ထားပါ။
5. အဝေးထိန်းစနစ်သည် အဖွင့်နည်းလမ်းကို လွယ်ကူပြီး ဘေးကင်းစေသည်။
Home Wifi Digital Lock အတွက် ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်-
Home Wifi ဒစ်ဂျစ်တယ်လော့ခ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ခေတ်သစ်ဘဝအတွက် M5F ဒစ်ဂျစ်တယ်သော့ခလောက်များကို ပိုမိုသင့်လျော်စေရန်အတွက် 304 stainless steel လော့ခ်ကိုယ်ထည်၊ အသံတိတ်သော့ချိတ်၊ ဇင့်အလွိုင်းသော့ခလောက်များကို ရွေးချယ်ထားပါသည်။
Home Wifi Digital Lock အတွက် အင်္ဂါရပ်များ
လော့ခ်ဖွင့်ရန် နည်းလမ်း7ခု- လက်ဗွေ၊ စကားဝှက်၊ ကတ်(Mifare-1)၊ စက်ခလုတ်များ၊ Wechat အသေးစား ပရိုဂရမ်၊ Bluetooth နှင့် NCF အဖွင့်
အရောင်- ငွေရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ အနက်ရောင်
လက်ဗွေအတုအဖွင့်ကို ရှောင်ရှားရန် semi-conductor လက်ဗွေကို အသုံးပြုသည်။
အကာအကွယ်ထည့်သွင်းခြင်းသည် စကားဝှက်ဖြင့်ဖွင့်ရန် ပိုမိုဘေးကင်းပါသည်။
အဝေးထိန်းကိရိယာသည် သော့ခလောက်များကို တစ်ပြိုင်နက်ဖွင့်နိုင်သည်။
Home Wifi Digital လော့ခ်အတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများ
1 လက်ဗွေ (MF5) လက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာ စပယ်ယာတစ်ပိုင်း
လက်ဗွေရာ စွမ်းရည် 100pcs
မှားယွင်းသော ငြင်းပယ်မှုနှုန်း (FRR) â‰¤0.01%
မှားယွင်းလက်ခံမှုနှုန်း (FAR) â‰¤0.0001%
2 စကားဝှက် စကားဝှက် အရှည် 6-8 ဂဏန်းများ
3 ကတ် ကတ်အမျိုးအစား Mifare-1
4 အဝေးထိန်းစနစ် Wechat Mini ပရိုဂရမ် ဘလူးတုသ်
5 လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား AA ဘက်ထရီ (1.5V*4pcs)
6 ပါဝါစားသုံးမှု Static Current â‰¤60uA
7 စံနှုန်းများ ပစ္စည်း ဇင့်အလွိုင်း
hot Tags:: Home Wifi ဒစ်ဂျစ်တယ်လော့ခ်၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်